रुपन्देहीको बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा एक संक्रमितको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बुटवल उपमहानगरपालीका ८ का ५५ वर्षीय पुरुष रहेका छन् । गत कात्तिक १ गते पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएका उनको शुक्रबार बिहान ८ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले बताए ।त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट सिरहामा थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय सिरहाका प्रमुख कृष्णदेव यादवका अनुसार सुखीपुर नगरपालिका–८ का ७० वर्षीय वृद्धको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचारका क्रममा बिहीबार मृत्यु भएको हो ।मृतकलाई कात्तिक ३ गते उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना गरिएको थियो । सोही दिन स्वाब लिइएको उनको भोलिपल्ट पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो ।
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १०:०७
रुपन्देहीको बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा एक संक्रमितको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बुटवल उपमहानगरपालीका ८ का ५५ वर्षीय पुरुष रहेका छन् । गत कात्तिक १ गते पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएका उनको शुक्रबार बिहान ८ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले बताए ।
त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट सिरहामा थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय सिरहाका प्रमुख कृष्णदेव यादवका अनुसार सुखीपुर नगरपालिका–८ का ७० वर्षीय वृद्धको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचारका क्रममा बिहीबार मृत्यु भएको हो ।
मृतकलाई कात्तिक ३ गते उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना गरिएको थियो । सोही दिन स्वाब लिइएको उनको भोलिपल्ट पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो ।
Prevयुवकको हत्या गर्ने तीन जना पक्राउ
विश्वरूप मन्दिर पुनःनिर्माण गर्न पुरातत्वको स्वीकृतिNext
सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टरको कोरोनाबाट मृत्यु
वरिष्ठ शल्यचिकित्सक डा. मुडभरीको कोरोनाबाट निधन
मृतक परिवारलाई ५० हजार सहयोग
कोरोना सङ्क्रमणबाट काभ्रेमा २ वृद्धकाे मृत्यु
कोरोना सङ्क्रमित वृद्धको मृत्यु